95% i-Aluminium Oxide Ceramic Ignition Insulator China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Spark Plug Insulator > Ignitor Insulator of Household Electrical Appliances > 95% i-Aluminium Oxide Ceramic Ignition Insulator
Njengoba sizibophezele ngokuqinile, sisebenzela ukuhlinzeka ngezindlela eziningi zokushisa i-electrode ceramic tube. I-Alumina ignition electrode tube ye-ceramic yenziwe ngamaphesenti angama-95% e-alumina oxide ceramics, bese igcwele ungqimba lwe-glaze ebusweni obungaphandle. Ingakwazi ukumelana namandla amakhulu kuze kube ngu-20KV, imali ephezulu kanye nokushisa okuphezulu kufika ku-1600 ℃.
Sinekhono elikhulu lokukhiqiza ezinkulungwaneni zezigidi njalo ngenyanga. Futhi , sinikeze umsebenzi we-prototyping nge-batch encane kakhulu ukusekela izidingo ezikhethekile zamakhasimende noma uhlelo lwe-R & D.